Loza iray, loza roa, loza telo… | NewsMada
Tsy mbola misy nahavita ny vitan’izao fitondrana izao, hono, tao anatin’izay 50 taona mahery niverenan’ny Fahaleovantenam-pirenena izay. Marina ve izany? Na izay fitompoana teny fantatra sy fireharehana izay aza, hisy ho sahy ratsy hiteny toy izany ireo mpitondra teo aloha nifandimby?
Toy ny hoe hanarina ny fahavoazana rehetra nandritra izay niverenan’ny Fahaleovantena izay no nifanarahan’ny mpifidy tamin’ny filoha tamin’ny fifidianana. Dia viraviraina sy hirahiraina lava ny hoe tsy vita indray andro ny fanarenana. Mila fotoana lava hanohizana izao fahavoazana izao?
Tsy mbola misy loza sy fahavoazana toy izao, na efa nisy ihany aza izany teo aloha. Eo, ohatra, ny tondra-drano, ny haintany, ny tsy fanjarian-tsakafo, ny fihanaky ny aretina pesta, ny tsy fandriampahalemana, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny kolikoly avo lenta, ny fanjakazakan’ny vahiny…
Nahoana loatra? Maizina tanteraka… Fiteny ny hoe fandio iray siny, tsy mahaleo ny fandoto eran-tandroka. Raha izao fiseho sy fandehan-javatra izao: ny ratsy no be no ho ny tsara. Hahaleo fandoto iray siny ve izay fandio iray tandroka, na toy inona fanamarinan-tena ataon’ny mpitondra?
Amin’izany, inona loatra no mbola mampitompo teny fantatra sy mampitsamboaboatra an-toerana, fa mandeha ny raharaham-pirenena, mihazakazaka be ny fampandrosoana, misy ny fijerena ny vahoaka… ? Tsy misy mahavita ny vitany, na efa hita sy iaraha-miaina izao aza ny loza iray, roa, telo…
Efa voka-javatra ireo fa tsy kisendrasendra hoe anton-javatra manahirana tsy ahazoana miasa sy mandroso? Tsy inona fa noho ny tsy fiomanana hitondra. Kisendrasendra no nahazo fitondrana, hany ka tsy manao afa-tsy izay hitanana izany amin’ny fandikan-dalàna, fampiasana hery, famonoana afo…
Aorian’izao pesta izao, tsy fantatra raha ho fongana tanteraka na tsia: inona indray no hitranga? Ny hamisavisana ny ratsy, hiavian’ny soa. Ny hoe mitondra, miomana amin’izay mety hitranga. Nefa tsy miomana amin’izay mety hitranga izay, afa-tsy izay manohintohina ny toerana? Loza iray, loza roa…